Bara Haaraa kana Bifa Maaliin Simachaa Jirraa?
HomeAfaan OromooBara Haaraa kana Bifa Maaliin Simachaa Jirraa?
Damee Boruu:Amajjii 02/2021
Naqamtee, worshippers attacked: On January 2, 2021, the Abiy regime’s special police killed and wounded a congregation of Protestant church. Women and children were among the casualities.
Biiftuun ganama baatii galgala galti. Rakkina dhaltee jette yookaas gammachuun argame jette yaroo utuu hin bahiin ooltu hin jiru. Erga ganama baatees biyyaa lafaa kana irratti hammeenya suukakaneessaa raawwatamaa oluus isheen yaroo ishee eegatee galuu hin dhiiftu. Barris akkuma biiftuu kana sa’aatii utuu hin taane guyyaa lakkawwatee hin dhufaa hin darba. Dhaabbatees nama hin eegu. Bara dhufuu waan nu eegatuu hubachuuf waan keessa dabarre xinxallee isaa dhufuuf qindoominan qophaa’uu fi ijaaramuu qabna. Keessattu bara darbe kana keessa qabsoon keenya hanqina, laafinaa fi jabinaa argame add baafnee kan fala nu kadhachaa jiru itti maluu qabna.
[su_quote]Waldaa Araraa Waqayyoo jedhamuun beekamu halallaa hordoftoota amantaa Protestant irratti rawwatameedha. Qaamonni haleellaa raawwatan wayyaa polisii addaa Oromiyaa uffataan afaan Oromoo kan hin beekneedha jedhama. Maqaa shanee qulqulleessuu jedhuun bilxiginnaan ummata nagaa ajjeesuu fi hiraarsuun akkuma itti fufetti jira. See photos above.[/su_quote]
Warraaqisi Uummata Oromoo bara 2018 karaa nagaa gageessame haala biyyi lafaaf fakkaeenya tahuun waraana Wayyaanee nama nyaataa tahe Oromiyaa irraa buqqisuun injifannoo gonfachuun waan dhagatamu miti. Galmi warraaqisaa diina gonbisuu qofa utuu hin taane mootummaa fi sirna haqa uummata tiksuu ijaaruun xumuramuu qaba ture. Warraaqsi uummata keenya kan uummata olla keenyaa warra akka Sudaaniif fakkenya tahe utuu galma isaa hin gahiin gufatee jira.
Bakka har’a jirru kana irra dhaabbannee qabsoo bilisuummaa Uummatni Oromoo abaltu karaa irraa dabse jenne wal komachuu fi wal abbaruuf yaroo hin qabnu. Bu’aa irra argannus hin jiru. Garuu Qeerroon Bilisummaa Oromoo akka sana Uummata Oromoo Gutummatti hirmaachisee hoogganna sana fakkaatuun oofaa ture maaliif utuu qabsoon kun galma hin gahiin dhiisee dhaabbatee ilaaluu akka filate gaaffii sammuu nama baayyee keessa jiru dha. Warraaqisi galma isaa kan gahu yoo humni qabsoo hoogganaa jiru aangoo mootummaa aboome cunqursaa fi saaminsa hanbisee haqa uummtaa akka eegamuu godhe dhuwwaa dha. Qeerroon Bilisummaa Oromoo haala dinqisiisamuu qabun Ummata Oromoo gurmsee irree tokkon diina isaa irratti utuu bobbaasee jiruu maaliif ergisa aangoo (delegating Power) OPDOf dabarsee kenuun barbaachisaa tahe? Utuu gudunfaa yookan qoqqobbii tokko irra hin keewanne OPDOf dabrsuun dhiigni Qeerroo fi Qarreen Oromoo kummaatamaan itti dhangalaasaame maalif goodatti akka faca’ee hafu tahe? Erga diina dura deemaa Wayaanee injifannee kanee maaliif huriin qabsoo bilisummaa Oromoo irraa akka marsu godhame?
Haalaa keessa dabarre hubannee isa fuula keenya duraa haa qajeelfannuu jechuuf gaaffii kana kaasaa jira malee akka irratti wal dhabnuuf miti. Waan nu milqee rakkina har’a keessa jirru keessa nu galshe barre lammaffaa akka nutti hin deebinu gochuuf malee warri hurrii itti uwwisaa tures tahe warrii taa’ee ilaale garaagarummaa guddaa hin qaban. Maaliif yoo jeenne waggaa sadan darban kana keessa hammeenya suukkaneessaa Uummata Oromoo irratti raawwatamee Uummtni Oromoo seenaa isaa keessatti takkaa argee hin beeku. Bara haara kanatti yaroo tarkaanfannu waan silaa godhamuu qabu dhaganne, dogongoraan bira dabarre yookan dhuunfaa lubbu keenyaaf jennee waan balleesine yoo jiraate of qaruu qabna. Gaabuun qofaa gahaa miti.
Har’aan kana diina keenya isa duraa kan tahe ekeraa Minilkitu boolaa ka’ee uummata keenya fixaa jira. Uummatni Oromoo akka baroota murasa darbanii kana salphina, qaanii fi dhumaatiif saaxilamaa hin beeku. Warri nafxanyaa ammam iyyuu haa gabarru, jilbeefanee haa hojjennuuf amma dhibaa dhiba itti nu cabsanii nu irra deeman nu wajjin akka namaatti jiraachuu qophii fi fedhii hin qaban. Ayyaana isaa yoo argatan garuu lafa irraa duguguanii uummata keenya balleessuf of duuba jechaa hin jiran.
Waan amma har’a isaan gammachiisuuf OPDOn ilmaan Oromoo haala suukkaneessan hidhaa, ajjeessaa fi daraaraa jirtu garaa isaan hin geenye. Kumaatamaan Hooggantoota Ijaarsa Oromoo dabalatee mana hidhaa keessatti ukaamsitee hiribaata geergoo gochaa jirti. Qabeenya Oromoo fi biyyaa Oromoo akka qircatan ittii dhiiftee jirti. Ija keenya dura itti Mootummaa Impaayeera Itoophiyaa dhunfachaa jiru. OPDOn afaan baaftee illee isaanitu dubbachuuf dandeetis tahe beekumsa isaa hin qabdu.Taayee Danda’a ijoollee tikee holloo jechaa ooltu. Nama arbsuu fi maqaa nama xurreessuuf nama afaan bal’aa qabu malee nama siyaasaa miti. OPDOf garuu nama arbsuun siyaasaa tahuun ni mala. Siyaasaa hojjetanii waan uummata hoogganan tokko hin qaban. Umurii isaanii dheeraa kana keessatti hojiin isaanii tajaajila (service) Mootota Habashaaf kennuu dha.TPLF jalaa bahanii huduu nafxanya jala deemuu filatan. Sirni nafxanyaa waliin jiraachuuf hin beeku. Kan beeku kan isa jala deemu martuu baduu qabaa kaayyoo jedhu dha. Ergaamaan yoo ergaa isaanii raawwate baduu qaba. OPDOn bilxiginaa Oromoo jedhamu hin qabdu. Bilxiginaan Oromoo ijaarsa utuu hin taane ergamtuu OPDO guyaan itti dhokana’e dha.
Bilxiginaan Oromoo Kononeel Abiyi qofa. Isa immoo waan irraa barbaadan hundaa argatanii jiru. Kana booda isaanitti ba’aa taha malee bu’aa isaa ni fidu hin qabu. Kanaafu kan kee nu gahee jira nu irraa deemii jechaa jiru. Dhugaa dha kana booda Kononeel Abiyi nafxanootaaf kisiraa malee bu’aa dabaluuf hin qabu. Kana malee dhoqee inni keessa seenee jiru kana wajjiin laaqachuuf fedhii hin qaban. Akka hagadaa waan qabu keessaa xuuxanii gadi isa tufa jiru.
Jeneralonni Oromoo gaafa dantaa nafxanyootaa fi sirni nafxanyaa tiksan gootata jedhamu.Jeneraal Birhanu Julaa, Baacaa Dabalee, Geetachew Guudinaa, Alem Isheete Degefee waan uummata biyyaa isaa itti duulaniif goota jedhamanii jiru. Garuu gaaffi tokko dammaqtanii yoo dhugaaf dhaabatan soodaatuu, gantuu, “kaadiwoochi” jedhamtanii akka jeneral Demisoo Bultoo fi jeneral Maridi nuguseefaa isiin salphisanii akka saree reenfa keessan lafa irra gototanii bakka owwaala keessanii illee arguuf hin deemnu. Obbolaa keessan irraa bara dha.
Lafa Amharaaf deebisuuf jetanii Uummata Tigray irratti yaroo dultan goota. Injifatanii akka galuuf hin jirree isinuu beektu. Yaroof malee of tultonni Amhaaraas kan hojii isaanii ni argatu. Uummata Tigray irra lafa takkuu tokko illee fudhachuu hin deeman. Amma immoo kunoo Beenshaangulii fi Oromiyaa irratti nuu dulaa jechaa jiru. Dula kana qophaa jirtu? Kan Benshaangul hin beeku malee Uummata Oromoo irratti duula waggaa sadii gootani hin milkoofne. Nafxanyoota gammachisuuf yoo oddeesitan ni gaha. Benshangul yoo deemaatan garuu xiyya hudduu keessanitti akka hafufan hin dagatiina.
Yoo dhiraa fi gootata taatan silaa diina daangaa cabsee dhufee biyya Amhaara qabatee waraana Sudaan weeraruu qabdu. Amhaarri utuu biyya namaaf boo’uu kan mataa isaa iyyuu dhabaa jira. Yoo waan Amaarri barbaadu kana hin goone jiraachuun keessan barbaachisaa miti. Maqaa RIB hudduu nafxanyootaa jala deemtanii utuu isaanii lafa deebisaa jirtanii yaroo dangaan biyyaa humna alan cabu teesanii ilaaluun isinfuu qaanii dha. Nama maraate jala deemtanii qaanii uummata keessan irratti fidaa jiru.
Qabsoon keenya waan arganne afaan keenyaan barachuu fi hojjechuun, seenaa fi aadaa kabajuu fi guddiffachuu, waraana keenya gaachana Bilisummaa Uummata Oromoo WBO keenya kunusifacha fi guddifachaa, daangaa Oromiyaa jabeefachaa bara haara kanatti ce’aa jirra. Wabbiin bilisummaa Uummata Oromoo WBO qofa tahuu hubannee bara Haaraa kana keessa humna WBO dagaagsuuf Oromoonni biyya keessaa fi alaa jirru harka wal qabannee akka nama tokko itti ka’uun dirqama keenya. Ofii beelofnee WBO beeluu haa baafnu. Of deebonne WBO dheebuu haa baafnu. Of darree WBO dara haa baafnu. Isaanitu bakka keenya bu’ee bilisummaa keenya dhiiga isaa dhangalaase lafee isaa caccabsee dhugaan aarsaa kan taahaa jiru. Ummatni bilisummaa barbaadu waraana isaaf kabajaa fi tajaajila barbaachisu gochuu qaba. WBOn kan ijaarsa tokko miti. Waraana saba tokko itti. Waraana Saba Oromoo ti. Kana Caalaa dubbii dheersu hin barbaachisu.
Gadaan Gadaa Xumura Garbumaaa TI!
Injifannoo Uummata Oromoof+!
Qophii Raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa (﻿RABO) Amajjii 2, 2021
Dag. H. says:
International Call for Worldwide Protests Against Abiy, Isaias and UAE – Friday, Jan 8, 2021 and Friday, Jan 22, 2021
Also ON MONDAY JANUARY THE 4TH 2021, 9AM to 4PM
@UN HEADQUARTERS MAIN ENTRANCE
FIRST AVE. & 47TH STREET
Leave a Reply to Dag. H. Cancel reply